मर्जको बलियो सम्भावना भएका हिमालयन र इन्भेष्टमेण्ट बैंकका यी हुन् पेचिला विषय, सेयर लगानीकर्तामा पर्ला असर ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > मर्जको बलियो सम्भावना भएका हिमालयन र इन्भेष्टमेण्ट बैंकका यी हुन् पेचिला विषय, सेयर लगानीकर्तामा पर्ला असर ?
काठमाडौं । अहिले बजारमा हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकबीच मर्ज हुने चर्चा निकै चलेको छ । अब यो विषय चर्चा मात्रै नभएर वास्तविकतामा परिणत हुने देखिएको छ । अहिलेसम्म दुवै बैंकले सम्पती तथा दायित्वको मूल्याङकन (डीडीए) गरिसकेका छन् ।
कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिला मर्जको लागि समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गर्ने र डीडीए गर्न थाल्दा पछि कुरा नमिलेर सम्झौता भंग हुने गरेको थियो । तर हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पहिला डीडीए गरेर त्यसको प्रतिवेदन हेरेपछि मात्रै एमओयू गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । पहिला एमओयू गरेर डीडीए गरेको भए अपेक्षा अनुसार वित्तीय रिपोर्ट नआएको खण्डमा मर्जमा जाने सम्भावना न्यून हुने गर्दथ्यो । तर यी बैंकमा यो समस्या छैन । डीडीएका रिपोर्ट अपेक्षा भन्दा फरक आयो भने मर्ज झाँडिने समस्याबाट दुवै बैंक मुक्त भएका छन् ।
डीडीएको रिपोर्टले दुवै बैंकलाई मर्जरमा जान हु्ने देखाएपछि दुवै बैंकको सेयर स्वामित्वको हिसाबले धेरै नै अध्ययन आवश्यक देखाएको छ ।
एक बैंकका उच्च अधिकारीका अनुसार सम्झौता अघि गरिएको डीडीएले बैंकहरु आपसमा मर्जरमा जाने सम्भावना बलियो देखिएको छ ।
‘दुवै बैंक मर्जरमा जाने उद्देश्यले नै डीडीए भएको छ’ एक बैंकका उच्च अधिकारीले भन्नुभयो ‘अहिले यी बैंकहरु मर्जरमा जानेका लागि दुवै बैंकसँग फरक-फरक विशेषज्ञता छन्, त्यो विशेषज्ञा प्रयोग गरेर फरक खालको बैंक बन्ने बलियो योजना आन्तरिक रुपमा बनेको छ ।’
फरक-फरक विशेषज्ञता भएका बैंक एक हुँदा एउटामा भएको कमजोर पक्षलाई अर्कोले सुधार्ने र अर्कोसँग भएको कमजोर पक्षलाई एकले सुधार्दै लैजाने र उदाहरणीय बैंक बन्ने लक्ष्यका साथ बैंकहरु अघि बढिरहेका छन् । अहिले यी दुई बैंक नेपालको वित्त प्रणालीमा नेतृत्वदायी बन्ने तयारीमा रहेका छन् । यी बैंक मर्ज भएपनि पुँजी लगायतका हिसाबले पनि ठूलो र बलियो बैंक बन्नेछन् । त्यही स्वार्थ अनुसार नै अघि बढेको अधिकारीको दाबी छ । ‘त्यही स्वार्थले काम गरेपछि मर्जरमा जानको लागि शैद्दान्तिक तयारी भएको हो’ उहाँले भन्नुभयो ।
पेचिला बन्दै यी प्रश्न
पहिला एमओयू गरेर दुवै बैंकको फाइनान्सियल पोजिशन थाहा पाएर एमओयू रद्द गर्नुभन्दा सफा उद्देश्यले मर्जरमा जान नै भनेर दुबै बैंकको डीडीए सकिएको छ । डीडीए दुवै बैंकको बोर्ड बैठकले पास पनि गरिसकेको छ । अहिलेसम्म मर्जमा जान शैद्दान्तिक सहमति र डीडीएको काम सहिएको छ । रिपोर्टमा हिमालयन बैंकको १०२ रुपैयाँ र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
विश्वब्यापी रुपमा १० प्रतिशतसम्मको तलमाथीलाई बराबरी मान्ने प्रचलन रहेको छ । तसर्थ डीडीए रिपोर्टले दुवैको वित्तीय पोजिशनलाई बराबरी जस्तै र निकै बलियो पनि देखाएको ती बैंकर्सको भनाई छ । जसले गर्दा दुवै बैंक मर्जरका लागि उपयुक्त छन् । यतिले मात्रै मर्जरमा जान सम्भव नहुन पनि सक्छ । अहिले दुवै बैंक तेस्रो चरणको काममा लागि परेका छन् ।
मर्जरमा जाँदा अहिले भइरहेको कम्पनीको शाख अर्को कम्पनीमा जाँदा कम हुने को की भन्ने चिन्ता छ । दुई बैंक मर्ज भएपनि एउटाको ब्रान्ड रहँदैन नै । तसर्थ बैंक मर्ज भएपछि नाम के राख्ने ? दुवै बैंकका कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? बोर्डको संरचना कस्तो हुने ? दुवै बैंकको संयुक्त बोर्ड बन्दा कस्तो बन्ने ? म्यानेजमेन्टको संरचना कस्तो हुने ? कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? बोर्डले म्यानेजमेन्ट माथी नियन्त्रण गर्ने की, स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिने ? भन्ने प्रश्न रहेका छन् ।
अहिले दुवै बैंक यी प्राविधिक विषयको छलफल भनौ या यी प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन् । यी प्रश्नको जवाफ नआएसम्म बैंक मर्जरमा गयो नै भन्न नमिल्ने र जाँदैन पनि भन्न मिल्ने अवस्था नरहेको एक बैंकका अधिकारीले बताउनु भयो । ‘यी प्रश्नको जवाफ नआउँदै अहिले नै बैंक मर्जरमा जान्छ भनेर भनिहाल्ने अवस्था पनि छैन्’ उहाँले भन्नुभयो ‘बैंक मर्जरमा जाने थिएन भने एमओयू गर्नु भन्दा पहिला डीडीए किन गर्नुपर्ने थियो र ? डीडीए त मर्जरमा जाने पवित्र उद्देश्यले नै गरेको हो ।’ यति बेला दुवै बैंकको व्यवस्थापन र बोर्ड यी प्रश्नका जवाफको खोजीमा तिब्रताका साथ लागेको ती अधिकारीले अर्थतन्त्रलाई बताउनु भयो ।
चिन्ता सरकारी बैंक बन्ला भन्ने
हिमालयन बैंकमा ठूलो होल्डिङ कर्मचारी सञ्चय कोष र पाकिस्तानको हबिब बैंकको रहेको छ । बैंकमा कोषको सेयर स्वामित्व १४ प्रतिशत र २० प्रतिशत हबिब बैंकको रहेको छ । ५१ पतिशत संस्थापक सेयरमा ३४ प्रतिशत त कोष र पाकिस्तानी बैंकको नै रहेको छ ।
यता इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा धेरै सेयर स्वामित्व राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको रहेको छ । बैंकमा कम्पनीको १२.१५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । त्यस्तै नागारिक लगानी कोषको २.६३ र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको १.१४ प्रतिशत सेयर छ । हिमालयन बैंकमा सर्वसाधारणको सेयर १५ र इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा सर्वसाधरणको ३१ प्रतिशत सेयर रहेको छ ।
हिमालयन बैंकमा कर्मचारी सञ्चय कोषको १४ प्रतिशत र इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष र बीमा सस्थानको गरी १५.९२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । दुवै बैंक एक हुँदा २९.९२ प्रतिशत सेयर सरकारी निकायको हुँनेछ । अझ हबिबको २० प्रतिशत थप्दा ४९.९२ प्रतिशत हुन जान्छ । संरचनागत रुपमा हेर्दा धेरै मात्रमा सेयर संरचना सरकारी निकायको देखिने भएको छ ।
नीजि क्षेत्रले प्रबद्र्धधन गरेर बनाएको यति ठूला दुई बाणिज्य बैंक एकै पटक सरकारी पोल्टामा जाने हो की भन्ने त्रास पनि देखिएको छ । सरकारको सेयरको हिस्सा धेरै भएपछि नीजि क्षेत्रले सञ्चालन गरेको स्वायत्त बैंक बन्छ वा सरकारले सञ्चालन गरेको नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक जस्तो बन्छ भन्ने चिन्ता बढेको छ । स्रोतका अनुसार आगामी सातासम्म एमओयू हुने सम्भव प्रायः भएको छ ।
कत्रो बन्छ बैंक ?
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मा हिमालयन बैंकको चुक्तापुँजी १० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ । दुवै बैंक एक भएपछि बैंकको चुक्तापुँजी २६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी हुनेछ ।
यस्तै हिमालयन बैंकको जगेडा कोषमा ५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बढी रहेको छ भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको कोषमा १२ अर्ब १५ करोड रहेको छ । बैंक एक भएपछि १८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ ।
यस्तै दुवै बैंक मर्ज भएपछि बैंकको निक्षेप पनि बढने नै छ । चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा १ खर्ब २९ अर्ब ९२ करोड रहेको छ भने इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १ खर्ब ६६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । निक्षेप संकलनमा हिमालयन भन्दा इन्भेष्टमेन्ट बैंक अगाडि रहेको छ । दुवै बैंक एक हुँदा निक्षेप संकलन २ खर्ब ९६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।
यस्तै चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा हिमालयन बैंकले १ खर्ब ९ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ भने १ खर्ब ३८ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ । मर्ज भएपछि कर्जा लगानी २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बढी नै हुनेछ ।
सेयर लगानीकर्तालाई कस्तो पर्ला असर ?
यी दुवै बैंक मर्जरमा जाँदा सेयर लगानीकर्तामा पनि निकै चासो बढेको छ । लगानीकर्ताले हेर्ने भनेको बैंकले दिने प्रतिफल नै हो । दुई ठूला बैंक मर्ज हुँदा लगानीकर्तालाई कति प्रतिफल आउने हो भन्ने चासो बढेको छ । एक लगानीकर्ताले यी दुई बैंक मर्जरमा जाँदा लगानीकर्तालाई भने कुनै पनि प्रभाव तथा असर नपर्ने बताउनु भयो ।
दुवै कम्पनी एकै हैसियतका भएका कारण त्यसले लगानीकर्तालाई कुनै प्रभाव भने पर्दैन । यी बैंक मर्जरमा जाँदा कुनै बैंकका लगानीकर्तालाई पनि तत्काल नाफा वा घाटा हुनेछैन । बुधबारसम्म हिमालयन बैंकको सेयर मूल्य प्रति कित्ता ४९८ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४६६ रुपैयाँ रहेको छ ।
२०७७ चैत्र ४ गते १९:५५ मा प्रकाशित
एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्दै सिटिजन्स बैंक (सूचनासहित)
भारतीय रुपैयाँ अभाव, यस्तो छ करण
एडिबीले भौतिक पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने
भोलि निफ्राको आईपीओ बाँडफाँड हुने, कति कित्ता पर्ला त ? यस्तो छ अन्तिम तयारी !
नेपाल टेलिकमको अनलिमिटेड अफर